'Furiosa,' 'Ukufaka kukaMad Max', Okumiselwe Ukuqala Ukuqopha ifilimu eNew South Wales
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'Furiosa,' 'Ukufaka kukaMad Max', Okumiselwe Ukuqala Ukuqopha ifilimu eNew South Wales
by Waylon Jordan April 19, 2021 1,382 ukubukwa
Ukufutheka, entsha Mad Max ifilimu nendaba yemvelaphi yomlingiswa odumile kusuka Mad Max: Fury Road, kumalungiselelo okugcina okuqala ukuqopha eNew South Wales, e-Australia. Le filimu kubikwa ukuthi izoba enkulu kunazo zonke ezake zenziwa e-Australia.
U-Anya Taylor-Joy (AmaNew Mutants, The Witch) uzothatha indima yokulingisa ebhekene noChris Hemsworth (Thor: Ragnarok). UHemsworth uvele nomakhi wama-franchise uGeorge Miller esithangamini nabezindaba namhlanje ezokhuluma ngezinhlelo zephrojekhthi okumele zikhishwe ngoJuni 23, 2023.
Le filimu kubikwa ukuthi izofaka u- $ 350 wezigidi zama-AUD kule ndawo futhi idale indawo ethile emisebenzini engama-850.
Mad Max: Fury Road kwakuyifilimu ebabazekayo ezuze ngaphezulu kwezigidi ezingama- $ 370 emhlabeni wonke, futhi lesi sahluko esilandelayo esilindelwe kakhulu singakwenza kalula lokho nokuningi. UCharlize Theron njengo-Imperator Furiosa wayengomunye wabalingisi abavelele kuleyo filimu, futhi kuzothokozisa ukufunda umlando wakhe wangemuva.
Umqondisi uphawule kulo mshicileli ukuthi uzinzo eWarner Bros.kube ngukhiye ekuqhubekeni kwephrojekthi.
“Selokhu saqala Fury Road Ngicabanga ukuthi sekube nemibuso eyisithupha ehlukene eWarner Bros, ”kusho yena. “Manje seyizinze kakhulu futhi sebekwazi ukunaka ngokuhambisana amafilimu abafuna ukuwenza futhi lena ngenye yawo.”
Ngabe usilungele esinye isahluko ku- Mad Max isaga? Ufuna ukufunda kabanzi mayelana Ukufutheka? Hlala ubheke iHorror ngazo zonke izindaba zakamuva njengoba zitholakala!